Tsenabe iraisam-pirenena ara-pamokarana Namboraka ny hetahetany ny tantsaha
Fampianarana ara-teknika Olana ny tsy fahampian’ireo akora fototra
Ny sehatra fampianarana no kitro ifaharan’ny fampandrosoana ary rehefa miakatra ny farim-pahaizan’ny olona amin’ny firenena iray dia tsaraina ho matanjaka avy hatrany izany firenena izany. Ankoatry ny olana misy eto amin’ny firenena tahaka ny tsy fahampian’ny famoronana asa sy ny tsy fisian’ny sehatra fampiofanana dia tena tsy ampy ny akora fototra. Eo amin’ny fampianarana teknika dia tena manahirana amin’ny mpianatra io resaka akotra fototra io eny anivon’ny ivon-toeram-pampianarana hoy i Rasolomanana Liva Tale Jeneralin’ny EMAP ESMAP ( Ecole des Métiers des Arts Plastiques).
Fampandrosoana ny firenena Tena ilaina ny vehivavy
Ny 51%-n’ny kandida mirotsaka solombavambahoaka eto Madagasikara dia vehivavy avokoa. Mampiseho izany fa tena vonona ary mangetaheta hitondra fampandrosoana eto amin’ny firenena ny vehivavy, hoy ny nambaran’ny kandida depiote tsy miankina ao amin’ny boriborintany fahatelo, Nova Colombe.
International Fair Tourism Madagascar Nasaina manokana i Indonezia
Omaly zoma 12 Aprily no nampahalalana tetsy amin’ny Ministeran’ny fizahan-tany eto Madagasikara ny hetsika fampahafantarana ny International Fair Tourism (ITM 2019). Fantatra tamin’izany fa namaly avy hatrany ny fanasana natao azy ireo ny firenena Indoneziana ary vonona tanteraka hitondra sy hizara ny traikefany.
Banky Maneran-tany Olana mampahantra ny vahoaka ny vidin-tsolika
Nivoaka ny tatitra avoakan’ny Banky Maneran-tany isaky ny enim-bolana hanaovana ny fanadihadiana ny toekarena eto Madagasikara. Nanambara ity tatitra ity fa azo leferina ny toekarena tamin’ny taona 2018 lasa teo satria voatazona 5,2% ny tahan’ny fampandrosoana ara-toekarena. Azo io tarehimarika io noho ny fahatsaran’ny famokarana vary tamin’ny taona 2018 satria nidina ny vidiny noho izy betsaka teny an-tsena ary tsy dia nananosarotra ny toetr’andro.
Hetsika mifamatotra amin’ny toekarena Mila mazava ny tohiny
Iaraha-mahita fa mbola mamaka lalina ny kolikoly eto Madagasikara. Eo amin’ny tsena-barom-panjakana ohatra dia tsy mangarahara fa kitranoantrano hatrany no manjaka ary ireo akamakama ihany no mahazo ny tsena na misy aza fampafahantarana ho an’ny daholobe (appel d’offre).
Ketrika.com Manome fihenam-bidy 15 ka hatramin’ny 50%
Notanterahina nanomboka omaly etsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny hetsika La grande braderie de Madagascar andiany voalohany amin’ity taona ity.
Omaly alakamisy 13 septambra no nosokafana tamin’ny fomba ofisialy tetsy amin’ny Zone Forello Tanjombato ny Tsenabe iraisam-pirenena mahakasika ny ara-pamokarana (FIA) andiany faharoa.
Hotanterahina mandritra ny 4 andro ity tsenabe mamaly ny filan’ny tantsaha mpamokatra ity. Tanjona ny hijerena hatrany ny tsena anatiny sy ny any ivelany, indrindra ahafahana mifanakalo hevitra amin’ireo mpisehatra amin’ny tontolo ambanivohitra mba ho fanatsarana ny serasera ao anatin’ny sehatra famokarana hampitomboana ny vokatra. Ezahina ny hahasompitry ny ranomasimbe Indiana an’i Madagasikara ka hampandrosoana haingana ny fambolena tantanim-pianakaviana (agriculture familiale). Eo ihany koa ny sehatra fampiroboroboana ny mpandraharaha matihanina amin’ny fambolena (agri-business), indrindra ny fandraharahana hanodina ny vokatra ho fihinana (agro-alimentaire). Maro ireo tantsaha naneho ny hetahetany tamin’ity FIA andiany faharoa ity tahaka ny tokony hanamorana ny fananan-tany satria maro be izy ireo kanefa hita ho mihafihafy hatrany amin’ny fambolena sy fiompiana ataony. Iaraha-mahita anefa fa mbola migodana ny velaran-tany ahafahana mamboly sy miompy eto Madagasikara. Ankoatra izay, olana ihany koa ny tsy fahampian’ny fampiofanana ny tantsaha amin’ireo sehatra ireo ka miteraka ny tsy fahaiza-manao. Ny sehatra sahala amin’itony no hanamafisana ny traikefa sy ny fifehezana ny famarotam-bokatra ho an’ireo tsantsaha mpamokatra. Mbola mampikaikaika ny tantsaha ihany koa ny tsy fandriampahalemana izay tena mbola manjaka, indrindra amin’ny tontolo ambanivohitra ka nangatahan’izy ireo vahaolana maika amin’ny fanjakana.